Zụlite Ntughari site na Mgbasa Ozi Mgbasa Ọha na Social | Martech Zone
Friday, July 25, 2014 Wenezde, August 30, 2017 Douglas Karr
Akwụkwọ ozi a dị ịtụnanya nke TollFreeForwarding na-akwado na-agagharị na azụmaahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa site na mkpịsị ugodi 6 iji mezuo ịre ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta: Mmata, Mmasị, Ntugharị, Ọsọ, Iguzosi Ike n'Ihe na Nkwado.
Ejirila ọwara ahịa site na ụwa azụmaahịa n'ihi na ha na-enye ụzọ iji mee ka ọ dị mfe ma were ụzọ nke onye ahịa malite na nke mbụ ruo na nke ikpeazụ. Na omenala, nke a sitere na mmata mbụ wee ruo ọrịre, mana na mba mmekọrịta ugbua, ọ gbatịrị karịa nke ahụ. Jodi Parker
77% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-enyocha ntụle na nyocha tupu ha azụta ihe na 80% nke ndị ahịa na-atụ anya ka ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na mgbasa ozi mmekọrịta
Social media bụ a na-ajụ dị ka mba ndị ọzọ ebe ị na-adịghị nnọọ nwere ohere na-ere, i nwere ohere maka gị ahịa na-ere na n'ihi gị! Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na ị banye na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, ị ga-ahụ ndị na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. You nọ ya mgbe ha jụrụ gị? Ndị ahịa gị ọ nọ ebe ahụ ma nwee obi ụtọ na gị na ha na-aza?
A bụ ihe infographic na-ewepụta a mara mma nnyocha nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa:
Tags: mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozimgbanwe mgbasa ozielekọta mmadụ mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi